Shirka Jabuuti: Fursad Nabadeed Oo Mudan Taageero
Dadka qaarkiis marka ay ka sheekeysanayaan dalka Jabuuti, arrinta ugu horreysa ee maskaxdooda ku soo dhacda waxay tahay in Jabuuti uu yahay dal aay baaxadiisu aad u yar tahay kuna yaala Gacanka Cadmeed. Dhul saxaaro lama degaan ah, oo oon iyo kuleyl badan. Dal sabool ah oo aan laheyn kheyraad dhabiici fara badan; in badan oo muwaadiniinteeda ka mid ahna ay weli u halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha banii’aadmka sida biyaha, cuntada, caafimaadka, waxbarashada iwm taasoo ay kala mid yihiin dadyowga waddamada saboolka ee soo koraya. Markii loo eego yaraanta baaxaddiisa, saboolnimada, kheyraad la’aanta, iyo qallafsanaanta deegaanka, Jabuuti ma aha meel aay dadka caadiga intooda badan u hilooban ama ay siiyaan muhimad dheeraad ah balse waa meel ay si fudud iskaga illaabaan oo eysan siinin wax qiimo sidaas u sii weyn.
Hase ahaatee dadka nabada jecel gaar ahaan Somalida badankeeda,Jabuuti waxay u tahay goob muhiim ah. Goob laga abaabulo nabad iyo kheyr – gaar ahaan nabadeynta Somaliya oo muddo dheer ku jirta dagaal sokeeye. Dadkaan, oo aan aniguba ka mid ahay, Jabuuti waxay u tahay rajo aan dhamaaneyn, himilo nabadeed, iyo awoodda uu banii’aadamku u leeyahay is-cafinta, heshiinta, iyo is-afgaradka oo ah waxyaalaha ay dadku uga duwan yihiin xayawaanka. Sida la wada ogsoon yahay ma aha markii ugu horreeysay ee ay Jabuuti martigeliso shir nabadeed Somali. Laga soo bilaabo 1990-shagaashaneeyadii ilaa iyo manta waxaa lagu qabtay Jabuuty shirar badan. Waxaa xusid mudan kii magaalada Carte ee lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaar aheyd ee ka horreysa tan hadda jirta. Inkastoo shirar badan lagu qabtay waddamo kale sida Masar, Sacuudiga, Ethiopia iyo Kenya waxaa la doodi karaa in shirkii Carte uu saldhig u yahay bilaabashada wax lagu tilmaami karo dhaqdhaqaaqyo nabadeyn runta ah. Haddii aad fiiriso shirarka lagu qabtay Masar iyo Ethiopia waxaad arkeysay iney ahaayeen kuwo ay isugu imaan jiraan dad isku sheega iney matalayeen dadkooda, laakiin dhab ahaantii ay ahaayeen dad naftooda un matalyey. Hase yeeshee shirkii Carte waxay aheyd markii ugu horreysay ee la isugu keenay dad fara badan oo matalayay bulshada qeybaheeda kala duwan sida culumaau’ddiinta, ugaasyada, isimada, suldannada, ururrada bulshada, saraakiishii dowladdii hore, ururada haweenka iwm. Laga bilaabo abaabulkii shirka ilaa iyo dhamaadkiisa, dowladda Jabuuti iyo dadkeena waxay muujiiyeen sida ay diyaarka ugu yihiin wax ka qabashada dhibaatada Somaliya iyadoo Jabuuti ku daadashay iney isu keento intii weji and magac ku lahay bulshada Somaliya. Sida la ogyahay waxaa halkaas ka dhashay dowlad inkastoo ay dowladdaasi dhicisowday oo ay gaari weyday himilladdii loo dhisay. Waxaad u maleysaa in shirkii Carte dardar geliyay qabashada shirarkii kale iyo habka qabashadoodi sida kii lagu qabtey Kenya. Shirkani wuxuu raacey tubtii habkii Carte oo waxaa la isugu keenay in badan ee magaca iyo muuqaalbka ku leh bulshada Somalida, waxaana halkaas lagu soo dhisay Dowladda Federaalka Ku Meel Gaarka ah ee haatan jirta.
Haddaba iyadoo aysan aheyn markii ugu horreysay ee shir-nabadeyn lagu qabto dalka Jabuuti, ayaa su’aash in leys weydiiyo u baahan tahay waxay tahay: muxuu shirka Jabuuti uga duwanaan karaa kuwii hore? Iyo maxay yihiin arrimaha ku qasbi kara ama culeys ku saari kara labada dhinac iney wada hadlaan oo ay soo fadhiistaan miiska wada xaajoodka? Waxaa jiro arrimmo muhiim ah oo rajo weyn siin kara shirka, kana jawaabi kara su’aalaha kor ku qoran, waxaana ka mid ah:
Waxaad mooddaa in Qaramada Midoobe ay waayahan dambe xoogga saareyso wax ka qabashada dhibaatada Somaliya waayo waxaa u caddatay in mushkiladda Somaliya ay ka mid tahay tan ugu adag dhibaatooyinka haatan ka taagan Qaaradda Afrika haddii laga reebo arrinta Daarfuur. Qaramada Midoobey ama bulsahda caalamku waxay ilaa iyo xad ku guuleysteen qaboojinta ama daminta dabkii ka holcayey wadanka Rwanda iwm. Bal akhristoo ma rumeysan kartaa in dhibaatadii Rwanda oo ka fac yar tan Somalida balse ka baaxad weyneed markii loo eegoo gumaadka ka dhacay in la xasiliyay oo wax laga qabtey, hase ahaatee tii Somalidana aan weli la xallin? Culeyska ay Qaramada Midoobey saareyso xallinta arrinta Somaliya waxa horseed u ah Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Danjire Ahmedou Ould-Abdallah. Danjiruhu wuxuu si hagar iyo daal la’aan ugu guntaday heshiisiinta dhinacyada isku haysta siyaasada Somaliya isagoo aad arkeysid sida uu warqado furan ee uu ka codsanayo bulshada Somaliyeed iney taageerto nabadeynta uu si isdaba joog ah ugu faafiyo warbaahinta Somalida. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobey waxay ayaamahaan dambe ka wada hadlayeen sidii ciidamadu nabad-ilaalin ah loo keeni lahaa Somaliya iyadoo aad moodid in Goluha ay u caddaatey in joogitaanka ciidamda Ethiopiyanku uusan xallin karin dhibaatada Somaliya, iney sii cakiriso mooyee. In ciidamdii laga filayey iney ka yimaadaan Ururka Midowga Africa eysan soo socon taasoo ay ugu wacan tahay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dowladihii Afrikaanka oo aan diyaar u aheyn arrinta, kharash la’aanta etc. Sidaas darted Qaramada Midoobey waxay haatan ku qasban tahay in si degdege wax ay uga qabato arrimaha Somaliya. In kastoo ay Golaha Ammaanka u qorsheysneyd iney taagaan dalal Afrikaan ah ayaa hadda tegitaankooda la filayo iney tagaan Jabuuti siineyso shirka muhiimad dheeraad ah. Marka waxaa la habboon inta nabadda jecel in laga faaiideyso arrintaan iyada ah oo aan fursadaan la sii deyn.
Waxaa muuqata in bulshada caalamka ay ka go’an tahay in Somaliya ay yeelato dowlad maadaama eeysan suurta gal aheyn amaba eysan oggolaan karin in waddan uu ahaado dowlad la’aan muddo 17 sano ka badan saa darteedna ay bulshada caalamku taagereyso qaab dowladeed kasta oo ka jira Somaliya. Waxaa taasi muujinaya sida qaar ka mid ah dowladaha adduunku sida Fransiisku iyo Sacuudiga ay u taageerayaan Dawladda Federaalka. Waxaad u maleysaa in DFKMG ay u eg tahay tii ay ka bilaabaneysay saan-saan dowladeed taasoo la rajeynayo iney u horseedo dowlad loo wada dhan yahay oo soo celisa qaranimadii iyo midnimadii Somalida. Waxaad mooddaa in bulshada caalamku ay arrintaan ogsoon yahay, ayna u isticmaaleyso aalad ay ku xoojiso helitaanka qaab dowladeed. Iyadoo ka faa’iideysaneyso arrintaan ,dowladdu waxay iyaduna si xirfad leh u hergelisay iney ka furato safaarado waddamada qaarkood, taasoo ugu yaraan soo celin karta astaamihii dowladeed.
Inkastoo aanan jecleen inaan Somalida u qeyb-qeybiyo qabiil-qabiil, ayaamahan dambe waxaa moodaa in colaadihii ka dhexeyey qaar ka mid ah qabiillada Somaliyeed ay soo yaraaneyso iyadoo ay taasi sabab u tahay dhacdooyin ay ka mid yihiin shirarkii la qabtey, soo gelitaanka iyo joogitaanka ciidamda Ethiopiyaanka, iyo iyadoo qabiilladdi dareemayey in lagu waxyeeleeyay dagaallladi dhacay dhamaadkii 1980-naddi iyo horraantii 1990ka uu xanuunkoodi soo bogsanayo... oo ay qabaai-ilku is cafinayaan inkastoo run ahaantiiba eysan jirin dagaal u dhaxeeya qaba’ilka Somalida ee ay aheyd un in siyaasiyiin daneystayaal ah ay ka dhex oogayeen dagaal qabaa’ilka.
Waxaa u caddaatey dhinacyada isku haysta siyaasadda Somaliyaa ineysan markasta ku dheganaan karin mowqifkoodi hore ha noqoto kii ahaa is-aqoonsasho la’aanta iyo is-inkiridda, joogitaanka ciidamada Ethiopiyan-ka, awood-qeybsasho, iyo iyadoo qaar ka mid ah hoggomiyaasha mucaaradka sida Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ay dareemeen- iyagoo ku mahadsan - in heshiis la’aantu ay sii xumeyneeyso xaalada cakiran ee dadkii barakacey sidaas darteedna loo baahan yahay in la wada hadlo si xal siyaasadeedna la gaaro, dabka loo damiyo, dadka dhibaateysan loo daryeelo.
Joogitaanka ciidmada Ethiopianka – waxaa muuqata in DFKMG ay ka dheregsan tahay in joogitaanka ciidamda Ethiopiyanka uusan xal u noqon karin dhibaatada Somaliya waayo waxaa laga jooga muddo hal sano iyo bar markii ay ciidamadu ku soo duuleen Somaliya ilaa iyo haddana wax xal ah ma keenin ha noqoto wiiqidda awooddii xooggagii ay ugu yeereen argagixisada amaba ku soo dabaalidda dalka nidaam, xassillooni iyo kala dambeyn. Dowladdu waxay ogaatey in aysan markasta ku tiirsanaan karin ciidamda Ethiopiyaanka. Arrintani waxay niyad iyo dhabar jabba ku noqotey qaar ka mid saraakiisha sar sare ee dowladda sida Cabdullahi Yusuf oo aaminsanaa in xoog wax lagu maquunin karo...Bal akhristoo waxaad moodda in ciidanka Ethiopianka oo ka mid ah kuwa ugu xoogga badan Qaarada madow...uu ilaa iyo hadda wax weyn ku soo kordhinin nabadeynta iyo xassilloonida Somaliya ee aan ahayn iska-horimaadyo joogta oo ay ku hayaan kooxaha wax iska caabinta... Waxaa kale oo xusid mudan in qaar ka mid ah saraakiisha sar sare ee dowladda ay aaminsan yihiin in ciidamada Ethiopia ay isaga baxayaan Somaliya marka ugu dhow ee suurto -gal ah, sidaasna waxaa qaba oo marar badanna ku elceliyay Raiisul Wasaaraha Nuur Cadde.
Iney jiraan qaar ka mid ah saraakiisha DFKG oo si dhab oo daacad ah u aaminsan in sida keliya ee lagu nabadeyn karo Somaliya ay tahay wadahadallo iyo wadaxaajood. Garabkaan uu hoggaaminya Raiisul Wasaraha Nuur Cadde oo dhowr jeer ku celceliyay sida uu diyaarka ugu yahay wadahadallo, iyo ciidmada Ethiopinku ka baxaan Somaliya muddo 24 sacadood ka yar haddii ay Somalidu sidaas rabto, xalkuna uu ku jiro gacanta Somalida, iyo in uu isagu raali ka yahay inuu jagada ka dego haddii taasi ay keeneyso xal siyaasadeed. Hadal macaanta Nuur Cadde ee ay ku dheehan tahay daacad iyo niyad wanaag waxey sameyn weyn ku yeelatay fikirka qaar ka mid saraakiisha mucaaridka. Tani waxay keentay iney qaarkood ka soo tanaasulaan mowqifkoodi ku aaddana joogitaanka ciidamada Ethiopian.
Waxaa kale oo aad moodda in saraakiisha mucaaradka ay ogaadeen in bulshada caalamku sida Midowga Yurub, Mareykanka iyo Qaramada Midoobeyba - waloow ay u jeedan in joogitaanka ciidamda Ethiopianku uusan xal aheyn – balse in wakhtiga la joogo eysan rabin in ciidamdada Ethiopiyaanku ka baxaan Somaliya iyadoo aan marka hore la helin ciidamo nabad-ilaalinta oo la wada oggol yahay oo beddeli kara kuwa Ethiopiyaanka. Sababtoo ah ka bixitaanka ciidamda Ethiopianku waxay keeni kartaa khatar kale oo ah awood-kala dhantaalan (power vacuum) tasoo keeni karta in dagaal kale uu dhaco oo lagu burburiyo dhismaha DFKG oo ah qaab-dowleedkii yaraa ee ay bulshada caalamku dhoodhoobeysay! Maxaa yeelay sida horeynba aan u soo sheegay - bulshada caalamka waxaa ka go’an in Somaliya yeelato dowlad! Marka fikirka bulshada caalamku waxa waaye iney ciidmada AMISOM ay sii joogaan Somaliya ilaa iyo inta ciidamo la wada oggol yahay la keeno Somaliya ama ay Somalidu heshiis siyaasadeed gaaraan. Mucaaridku arrinta way ogyihiin, waxayna arrintaan qaarkood ku qasabtay iney ka tanaasulaan mowqifkoodi hore.
Waxaa muuqata in khilaaf adag uu kala soo dhexgalay mucaaradka taasoo keeni karta in cududoodii kala sii jabjabto. Iyadoo ay u mooddid in khilaafka ka dhexjira DFKG uusan aheyn mid sidaas u sii buuran. Arrintaani, waxay sii adkeyneysaa mowqifka dowladda waayo waxaa soo caddanaya ineysan jirin xoogag midaysan oo mudan in lala hadlo. Tani waxay daciifineysaa mucaaradka.
Dowladda Ethiopianku waxay ogaatey, horeyna ay u ogeyd in joogitaanka ciidamadeed Somaliya uusan aheyn wax suurta gal ah oo sii socon kara muddo dheer markii loo eego arrimo fara badan oo ay ma mid yihiin siyaasad gobalka Afrikada Bari, ammaanka iyo xassilloonida gudaha Ethiopiya, dhibaata-xuduudeedka kala dhaxeyso dalka Eritrea, is-beddel ku dhici kara siyaasadda adduunka ee ku la dagaalka waxa loogu yeerey argagixsa, mitaal ahaan haddii uu isbeddel siyaasadeed ku yimaado maamulka Mareykanka oo wakhti la joogo lagu eedeeyo inuu maalgeliyo duulaanka iyo joogitaanka ciidamda Ethiopiyaanka. Ka soo qaad, haddii la doorto Sen. Barack Obama kaddibana uu go’aansado qaboojinta ama deminta holaca ka baxaya dagaalka la dagaallanka argagexisada. Taasi waxay mechaneedu tahay in mar alla markii uu Mareykanku ka goosto macaawinada la sheegagy, in dowladda Ethiopianku ku soo dhaceeyso bannaan cad oo cidla ah taasina keeni karto in ciidamadeeda laga saaro Somaliya iyagoo jab iyo ba’a dusha ka saran yihiin. Taasina ay keeni karto degenaasho iyo xassillooni la’aan ka dhalata gudaha Ethiopiya.
Maadama ay jiraan arrimaha kor ku xusan iyo arrimo kale oo aan halkaan lagu soo koobi karin ee dardar cusub gelinaya, siinayana wadahadallada fursad wanaagsan, ayaa waxaan u soo jeedinayaa labada dhinac arrimahaan soo socda:
In labada dhinacba ay ku dhawaaqaan xabad joojin degdeg ah si loo baajiyo dhiigga baxaya maalin kasta. Tani waxay u horseedi karta in wadahallada ku sii socdaa jawi nabad oo xassilloon.
Iney ka faa’iideystaan muhiimada ay Qaramada Midoobey siineyso arrinta Somaliya maxaa yeelay waa fursadaan qaaliga ah oo run ahaantii u horseedi karta nabad iyo xassillooni. Iney u isticmaalan quwadaha caalamiga ee halkaas isugu yimid sidii xal looga gaari lahaa dhibaatada Somaliya waayo haddii fursadaan ay lunto waxaa laga yabaa in dhibaatada Somalida ay sii cakirsanaato muddo dheer.
Iney ogaadaan in maanta arrintu ka weyn tahay is-khilaaf, is-jiidjiidasho, iyo is-eedeyn ee loo baahan in lala yimaado xikmad iyo caqli ka sarreeya khilaaf iwm. Waxaa loo baahan yahay in lala yimaado dabacsanaan, is-cafis, isu-dulqaadasho idinkoo markasta maskaxdiina ku haaya sidii loo badbaadin lahaa caruurta iyo maatada ay maalin kasta xabaddu dileyso amaba u dhimanayo gaajo iyo macluul.
In la diyaaro qorshe lagu dhisayo dowlad ku meel gaar ah oo ka kooban dhamman dhinacyada isku heysta siyaasadda Somaliya si markaas dowladdaasi ay uga shaqeeyso sidii loo qabanqaabin lahaa doorashooyin xor ah oo ka dhaca Somaliya mustaqbalka dhow.
Inaad danta guud ka hormarisaan tiinna gaarka ah waayo bulsha-weynta Somaliyeed wey idiin eegeysaa weyna og tahay ciddii dan gaar ahaaneed wadata, mar un beyna la xisaabtami doontaa!
In bulshada caalamku ka shaqeeyso habka ugu fudud oo ay ciidadamada Ethiopiyaanku uga bixi lahaayeen Somaliya iyo in la diyaariyo ciidamo dhexdhexaad ah oo beddeli kara ciidamada dowladaha safka hore.